Nhau - Matipi ekuti usadurure makushe pamajuzi emakushe
1. Unyengeri hwemajuzi emakushe kusadurura bvudzi: Nyungudutsa chipunu che starch muhafu yedhishi remvura inotonhorera, nyorova juzi remvere woiburitsa usingamonyanise, rinyurure ndokuisa mumvura nemari shoma yekugeza upfu, soak iyo kwemaminitsi mashanu. net.
2. Chikamu chakatetepa chechikero chichaumba pahari yealuminium kana poto yealuminium mushure menguva yakati rebei. Isa hombodo dzembatatisi mukati, wedzera huwandu hwakaringana hwemvura, wira, wira kwemaminitsi gumi, wozobvisa.
3. Uriri hwekicheni hune mafuta akawanda uye hazvisi nyore kuchenesa. Usati wapomba pasi, unogona kunyorovesa pasi rine mafuta nemvura inopisa kuti unyorove iwo matinji, wobva wadira imwe vhiniga pamopu, wozokorobha pasi kuti ubvise tsvina yemafuta pasi.
4. Mushure mekubatidza switch yegesi kuti ubatise, kana murazvo uri mutema, zvinoreva kuti gasi harina kutsva zvakakwana, izvo zvinoparadza gasi. Panguva ino, zvinokurudzirwa kugadzirisa vharuvhu yekudzora mweya kune iyo nzvimbo panonzwika rimi.
5. Paunenge uchishandisa hita yemvura, zviri nani kugadzirisa tembiricha iri pakati pe50-60 madhigirii, ayo anogona kudzivirira kuumbwa kwechikwiriso chemvura; apo tembiricha yemvura inodarika 85 degrees, kuumbwa kwesero kunowedzera.